Gianluigi Buffon Child Story and Unold Biography Facts
Home Ulo oru Europe Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Football, nke kachasị mara aha Nicknames; "Gigi, Superman". Gianluigi Buffon Child Story and Biography Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Buffon Biography nke dị mma. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mbido
Gianluigi "Gigi" Buffon mụrụ na 28th ụbọchị nke January 1978, na Carrara, Italy site Maria Stella Buffon (nne) na Adriano Buffon (nna).
A mụrụ onye na-agba egwu Ịtali na ezinụlọ ndị bara ọgaranya nke ndị Italy. Nne ya, Maria Stella, bụ onye na-atụgharị discus na nna ya, Adriano, onye a ma ama na Ịtali.
Dị ka nwa nke ụlọ, Gigi nwere mmekọrịta dị mma na ndị mụrụ ya, karịsịa nne ya nke nwere ọdịdị dị nro maka nwa ikpeazụ ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke nwata Buffon nke mama ya na-eme ka ọ bụrụ ụbọchị ọmụmụ ya.
Little Gianluigi Buffon na mama (n'ụbọchị ọmụmụ ya)
Buffon gosipụtara mkpụrụ ndụ ya dị elu dị ka nwatakịrị, niile na-ekele ndị nne na nna egwuregwu ya.
N'agbanyeghị mgbagwoju anya n'egwuregwu, ọ na-eji bọl. Mgbe ọ dị nanị afọ isii, nne na nna Buffon debanyere ya na ụlọ akwụkwọ football nke Canaletto di La Spezia ebe ọ malitere ịmalite ọrụ ya dị ka onye na-eme egwuregwu.
Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Nchịkọta Ọrụ
Gwa eziokwu. Gigi malitere dị ka midfielder na ọ dịghị mgbe ọ bụ onye nchebe. Nke a bụ otu maka David De Gea. Beow bụ foto nke na-eto eto bụ Buffon mgbe ọ bụ onye na-eto eto.
Nwa Buffon dị ka Midfielder
Ọ na-egwu egwuregwu mbụ ya na San Siro na 10 afọ na nkwonkwo maka ndị ntorobịa kasị mma na Veneto. Afọ abụọ mgbe e mesịrị, Buffon chọtara arụsị ya, onye nlekọta Cameroon Thomas N'Kono, bụ onye na-egwuri egwu na 1990 World Cup.
Akụkọ nke Idol Buffon- Thomas N'Kono
Thomas bụ onye ọrụ Buffon na-agbanwe agbanwe site na midfielder na onye na-eche nche. Ịtali nile ka na-akwụ ya ụgwọ ruo oge.
Buffon mere ihe mgbaru ọsọ ya mgbe mbụ ma ndị na-eche nche nke mbụ weere mmerụ ahụ. Mgbe nanị izu abụọ nke ndị Fans na-adọrọ mmasị, ọ ghọrọ onye na-eme njem na-adịgide adịgide, ọ bụghị nanị otu, ma ndị okenye abụọ na-eche nche na ya. Ọ bụ afọ 16 n'oge a.
Onye ntorobịa Ịtali na-eto eto nke ukwuu na Parma bịara n'oge nke anọ ya na club, mgbe o nyere aka merie Coppa Italia na UEFA Cup. Oge a bịara n'oge Ngalaba Parma kpaliri mmasị Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Lillian Thuram, na Fabio Cannavaro. Mgbe ihe abụọ ọzọ dị egwu na-acha odo odo na-acha anụnụ anụnụ, Buffon zigara Juventus maka euro 50 nde zuru oke (ndekọ maka onye na-elekọta ya n'oge ahụ).
Gianluigi Buffon Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ndụ Ezinụlọ
A na-akwụ ndị na-agba ọsọ Ịtali ụgwọ nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ. Inwe nne na papa ndi n'ememe n'egwuregwu di iche iche putara na abia site na ezinyere uzo bara uru. Nke a bụ ihe gbasara Gianluigi Buffon. N'ebe a, anyị na-enye gị nghọta na nne na nna Gigi.
NME: Buffon nna, Adriano Buffon bụ weightlifter. A mụrụ ya na 15th Sep 1945 na Latisana, Italy site na Masocco Giorgio (nna) na Paolini Teresa (nne). N'okpuru ebe a bụ foto nke nwa Adriano.
Nna Gianluigi Buffon - Adriano Buffon
N'ịgbaso ezumike nká ya, Adriano rụrụ ọrụ dị ka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ PE.
Nne: Nne Gigi, Maria Stella Buffon bụ onye na-atụgharị ụka nke na-anọchite anya Italy na ọkwa mba. O sonyeere di ya ka ọ rụọ ọrụ dịka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ PE mgbe ya laghachiri ezumike nká.
Gianluigi Buffon's Mother - Stella Maria Buffon
N'okpuru ebe a bụ foto nke oge a nke ndị nne na nna egwuregwu Gigi, Mr na Mrs Adriano Buffon.
Ugbu a dịka ndị nne na nna Gianluigi Buffon
ELDER SISTERS: Gigi bụ naanị nwa nke ezinụlọ ya. Guendalina Buffon bụ nwanne nwanyị nke okenye Gigi. A mụrụ ya na 1973. N'okpuru ebe a bụ foto nke ya na nwanne ya nwoke nwoke na agbụrụ gọọmenti Gigi 'Gigi'.
Guendalina Buffon na nwanne ya nwoke 'Gigi'
N'okpuru bụ foto nke Buffon Sister, Veronica Buffon. A mụrụ ya na 1975. Veronica Buffon na-egwuri volleyball maka ìgwè ndị volleyball ndị Italy.
Nwa nwanne Gigi bụ Veronica Buffon
OBI: Gigi Buffon nwere nwanne nna ya bụ Dante Masocco. Ọ bụ onye egwuregwu basketball na Serie A1, bụ onye na-anọchi anya ndị otu mba ndị Ịtali.
Nwa nwanne Gigi Buffon, Dante Masocco
IHE: Onye bụbu akụkọ Inter Milan na Ịtali akụkọ akụkọ bụ Lorenzo Buffon bụ nwa nwanne nne Gianluigi Buffon.
Nwa nwanne Gigi si Buffon -Lorenzo Buffon
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Gigi bara ezigbo uru. Nke a site na ihe ọ pụtara pụtara na ọ ga-enwe nsogbu mmekọrịta ya n'oge ndụ ya. Anyị na-ewetara gị, nkọwa banyere ndụ mmekọrịta ya.
Akụkọ akụkọ Gigi Buffon na-aga 2005 mgbe ọ zutere ma hụ Alena Seredova n'anya. Alena bụ onye mbụ na-agba ọsọ nke Miss Czech Republic na 1998 na onye nnọchiteanya obodo ya na Miss World 1998.
Gigi lụrụ Alena Seredova na June 16, 2011, na Prague. Ha nwere ụmụ abụọ, Louis Thomas (mụrụ 2007) na David Lee (nke a mụrụ 2009).
Gigi na ụmụ ya, Thomas (n'aka nri) na David (n'aka ekpe)
Akpọrọ aha Thomas 'nwa mbụ ya n'aha Gigi buffon Thomas N'Kono. Ọ na-ewepụta oge iji kpọọ ụmụ nwoke abụọ. Nke a na-eme mgbe ọ na-agbaji.
Na May 2014, Buffon mara ọkwa na ya ga - agba alụkwaghịm na Onye òtù ọlụlụ ya. Ha kewapụrụ mgbe afọ atọ nke alụmdi na nwunye.
N'oge na-adịghị anya, ọ na-ejikọta ya na ndị na-agba egwú Italian, ndị odeakụkọ na ndị na-egwu TV, Ilaria D'Amico.
Dị ka otu magazin dị n'Ịtali si kwuo, Buffon na D'Amico bụ "Dị ka rabbits" na ndị agbata obi amalitela mkpesa banyere mkpọtụ nke ịhụnanya ha.
Na 2015, Buffon mara ọkwa na di na nwunye ahụ na-atụ anya ka nwatakịrị na-enwe ọnụ. Na 6 January 2016, di na nwunye ahụ mara ọkwa ọmụmụ nwa ha Leopoldo Mattia na Twitter mbụ na mgbede ahụ.
N'oge okpomọkụ nke 2017, ha abụọ gbara aka. Tupu ya na Šeredová ya na alụmdi na nwunye ya, Buffon abanyelarị na onye ọkpụkpụ si n'òtù ndị omempụ mba Ịtali, Vincenza Calì.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Oge 2003 / 2004
Na 2013, Buffon kpughere na ya enweela ịda mbà n'obi n'oge oge 2003-04, na-eso Juventus na-agbapụ aka na njedebe 2003 Champions League, nakwa n'ihi nrụrụ ọjọọ nke Juventus n'oge ahụ.
Buffon na-eleta onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ mgbe nile, ma jụ ịṅụ ọgwụ, ma kwụsị ịda mbà n'obi tupu Euro 2004
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Business Wine
dị nnọọ ka Andrea Pirlo na Andres Iniesta, Buffon chekwara otu iko nke mmanya ya dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Site na Gigi Buffon ka Wesley Sneijder, nye Ivan Zamorano: ọtụtụ ndị na-agba agba football taa achọpụtala aha ha na karama mmanya dị ka aha.
Na nso nso a na 2017, Buffon weputara onwe ya mmanya mmanya n'okpuru aha "Buffon #1".
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Enyi na Pope
Buffon bụ Katọlik site n'okwukwe. Ọ bụ ezi enyi nke Pope Francis. Ha abụọ zutere na 2013 n'okpuru nche anwụ nke football na okpukpe.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Style nke Play na n'ikuku
Ebe ọ bụ na ọganihu dị ka talent dị mkpa n'oge ọ bụ nwata, a maara Buffon maka ọrụ ọ na-agbanwe n'oge niile ọ na-arụ ọrụ. Akụkọ a natara otuto sitere n'aka ndị isi, ndị egwuregwu, yana ndị na-arụ ọrụ mgbakọ na nke mbụ. Nke a bụ maka nchebe ya na obi iru ala na nrụgide ya, yana ụgwọ ọrụ ya, na ogologo ndụ.
A na-elekarị ya anya dị ka onye na-elekọta ihe nchebe nke oge a, ọtụtụ ndị ọzọ na-eche nche na-atụle ya dị ka ihe dị mkpa ma bụrụ ihe nlereanya.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ikike Nkeji
Mgbe ọ dị na Parma, Buffon kpebiri iyi uwe 88 ahụ, kama karịa nọmba 1 gara aga, maka Oge 2000-01 kpatara esemokwu na Itali.
Otú ọ dị, Buffon kwuru na ọ maghị ihe ndị na-egosi Neo-Nazi, na-ekwu na 88 nọchiri anya "anọ bọọlụ," bụ ihe nnọchianya nke àgwà na àgwà mmadụ. O kwuru na ha bu n'obi iji gosipụta mkpa ya maka àgwà ndị a mgbe o merụsịrị ahụ tupu Euro 2000 nakwa na ha na-anọchi anya "nlọghachi" ya.
O mechara nye ya ka ọ gbanwee nọmba, ịhọrọ nọmba squad 77.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ikpebi Mkpọrọ Mkpọrọ
Na 2000, Buffon chere na a tụrụ ya mkpọrọ afọ anọ maka ịkatọ diploma maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka o wee debanye aha na diplọl na Mahadum Parma.
Ọ kwụrụ ụgwọ 3,500 euro na 2001. O mechara kọwaa ihe ahụ merenụ dị ka akwa ụta ya.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ịgba Ụgwọ na-akwadoghị
Na 12 May 2006, n'oge dị elu nke Calciopoli asịrị, Ebubo Buffon ebubo na o zoro aka na Serie A nke na-akwadoghị, nke na-ebute ya n'Ịntanet nke 2006 World Cup.
A jụrụ Buffon nke ọma ma kwenye na ọ na-etinye ego na egwuregwu egwuregwu. Ọ bụ n'ihi ya ka a machibidoro ndị ịgba egwu egwuregwu ịkụ nzọ kemgbe October 2005. A kwụsịrị Buffon niile ebubo na December 2006.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Football Politics
Na 7 May 2012, Buffon hoputara onye isi oche nke ndị Italian Footballers Association (AIC). Nke a bụ nke mbụ ndị na-agba ọsọ na-arụ ọrụ na-ejide ọnọdụ a.
N'afọ ahụ, Buffon sonyere "Na-asọpụrụ Di iche iche" Mmemme, site na UEFA, nke a na-achọ ịlụso ọgụ megide ịkpa ókè agbụrụ, ịkpa ókè na ekweghị ekwe na football.
Gianluigi Buffon Child Story Plus Ihe Na - adịghị Eke Echiche Eziokwu -Ntube ya
Gianluigi Buffon ekwuola ọdịnihu dị mma n'ọdịnihu maka onye agbụrụ Gianluigi Donnarumma bụ onye na-eburu aha yiri ya. 'AC Milan na-eche nche Donnarumma nwere ike ịbụ nwa m nwoke' - ka Gianluigi Buffon kwuru.
Ọ aghọwo ihe a ma ama n'ịntanetị ịchọpụta ma onye na - elekọta ụlọ ahịa AC Milan nwere mmekọ na Buffon.
Dị ka onye na-agbachitere AC Milan ... "Enwere m nnukwu mmekọrịta na Gigi. Ọ na-enye m ndụmọdụ mgbe nile ma na-emeso m dịka nwanne ya nwoke ọbụlagodi na ị na-ekerịta otu aha ahụ ma ghara ịkọrọ anyị. Enwere m nwara na-ele ihe ọ bụla ọ na-eme na ọzụzụ na ana m ekele ya maka ịbụ dike nye m. Onye ọ bụla kwuru na m bụ onye nketa Gigi, nwa ya nwoke ma ọ bụ nwanna nwoke. Ugbu a, m na-elekwasị anya nanị na Milan ma na-eme nke ọma n'ebe ahụ, dị ka ọ bụ otu Enyere m aka kemgbe m bụ nwata. Anọla m na ụlọ ịgba. "
Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-anaghị ele anya, kpọtụrụ anyị!
Domenico Berardi Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Utold Biography
Andrea Belotti Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Josip Ilicic Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Ha Na-adịghị Eke Ndụ
Ulo oru Europe340
Juan Cuadrado Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma